Faarax Macallin: Ma dhici doonto in Mardambe Xamar looga taliyo Kulbiyow
Dowladda Federaalka KMG oo Sheegtey in ay soo Dhaweyneyso Ciidan kasta oo la Dagaalamaya Al-Shabaab
Wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya iyo wafddi uu hoggaaminayo oo dalka dib ugu soo noqday ka gadaal markii uu safaro ku soo kala bixiyay dalalka Kiinya iyo Itoobiya.
Xuseen Carab Ciise wasiirka gaashaan dhigga xukuumadda ku meel gaarka soomaaliya ayaa markii dalka ku soo laabtay waxa uu saxaafadda kula hadlay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka ayaa sheegey inuu ka qayb galay shirar dhowr ah oo looga hadlaya ammaanka dalka soomaaliya kuwaasoo uu sheegey in ay ka soo qayb galeen dalalka doonaya waa siduu hadalka u yiriye in ay ciidamo ku soo biiriyaan hawl galka amisom ee Soomaaliya.
Xuseen carab ayaa sidoo kale sheegey in uu ka qayb galay shirkii madaxweynayasha Somaliya, Ugandha iyo Kiinya ay wada yeesheen isla markaana uu goob joog ka ahaa.,Mr Carab ayaa intaa raaciyay in ay soo dhaweynayaan haddii ay yihiin xukuumaadda Soomaaliya dawlad kasta oo dalka imaanaysa si ay u taageerto dawladda Soomaaliyeed dooneyseyna in ay qayb ka qaadato dagaalka lagala soo hor jeedo Xarakada Shabaab.
Wasirka ayaa la weydiiyey sida uu u arko Ciidamada Itoobiya ee soo galey Qaybo ka mid ah Gobolada Galgaduud iyo Hiiraan wuxuuna sheegey ama uu ku celceliyey in ay soo dhaweynayaan Ciidan kasta oo la dagaalamay Xarakadda Alshabaab noocey doonaan ha ahaadeen.
Wasiirka ayaa intaa raaciyay in shuuradda ku xiran imaatinka dawladaha caalamka in ay tahay in aysan waxba u dhimeyn dalka Soomaaliya gaar ahaan Qaranimadiisa ,Hadalkan wasiirka ayaa imaanaya xilli dhawaan Ururka Midowga afrika uu ansixiyay in dawladaha Itoobiya iyo Kiinya ay ku biiri karaan hawl galka amisom oo haatan ay ka joogaan ciidamo dalalka Ugandha iyo Burundii iyadoo dhawaana la filayo ciidamo kale oo ka yimaada dalalka Jabuuti iyo Siraaliyoon.
Wasiirka gaashaan dhigga ee dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ayaa saxafiyiinta u sheegey in dhamaanba kulamadii laga yeeshey arrimaha soomaaliya ay noqdeen kuwo meel mar ah isla markaana wadamadii kulamadaas ka soo qayb galay ay ballan qaadeen in ay taageerayaan xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya.
Si kastaba waxaa maalmahan dambe hadal haynta ugu badan ay tahay ciidamada Kiinya kuwa Itoobiya iyo kuwo kale oo la sheegayo in ay imaanayaan arrimahaas oo si aad ah loo hadal hayo in kastoo hadaladan uu wasiirku ka shanqariyay ay u dhigmaan hadalo ay hore u jeediyeen Shabaab oo ahaa in cid kasta oo Jihaad doon ah uu u furan yahay dalka soomaaliya soona geli karaan.
Ciidamada AMISOM oo La Soo Gaarsiiyay Diyaarado Dagaal oo Noocoodu uu yahay Helikoptaro ah
Warar lagu kalsoonaan karo oo laga heley dhinaca Madaxtooyada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada Amisom ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho loo keenay illaa afar diyaaradooda oo helicopteris ah.
Diyaaradahan helikobtariska ah oo nooca dagaalka ah ayaa la sheegey in markii ay soo gaareen magaalada Muqdisho in ay sameeyeen hawl galo iyo baaritaano ay ka fuliyeen goobaha ay ciidamada Amisom kaga sugan yihiin magaalada Muqdisho.
Diyaaradahan dagaalka ee loo keeney ciidamada Amisom ayaa sida la sheegey dhawaan waxaa lagu arkay iyagoo joog hoose ku duulaya degaano ay Maamulaan Xarakada Al Shabaab kuwaasoo sida la sheegey loo malaynayay in ay sawiro ka qaadayeen halkaas .
Diyaaradahan ayaa qayb ka noqonaya gaadiidka ay ku hawl galaan ciidamada Amison oo haatan qorsheynaya in ay isku sii fidiyaan degaanada ka baxsan magaalada Muqdisho kuwaasoo la sheegey waddooyinka oo xun dartood in diyaaradahan ay qayb ka qaataan gaarsiinta ciidamada goobaha dagaalada iyo soo qaadida dhaawaca ciidanka.
Dawladda Ugandha ayaa hore u sheegtay in ay gudaha soomaaliya u soo direyso diyaaradaha helikobtariska ah haddii ay dhaqaale u hesho taasoo sida ay sheegeen door ka ciyaareysa dagaalka lagula jiro ciidamada xaraka shabaab.
Codsiga xukuumadda Ugandha ayaa u muuqanaya mid la aqbalay iyadoo sababtuna ay tahay in dawladda Ugandha ay durbaba gudaha soomaaliya soo gaarsiiyay diyaaradahaas dagaalka.
Si kasta ha ahaatee ma cadda diyaaradahan qaabka ay ula hawl galayaan ciidamada amisom iyo kuwa dawladda oo iskaashanaya walow amisom iyo dawladduna aysan ka hadal diyaaradahan la sheegey in Muqdisho la keenay ,hase yeeshee waxaa xusid mudan markii Cidamada Itoobiya ay soo galeen Soomaaliya gaar ahaan Magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga soo ridey Diyaarad Dagaal oo Nooceedu yahay Helekopter ka dib mar dambe ma isticmaalin Ciidamada Itoobiya Diyaarado Dagaal waxayna dadweynaha ay isweydiinayaan qaabka ay Ciidamada Amisom u isticmaali doonaan Diyaaradahaas maadaama la haysto Qoryaha lidka Diyaaradaha.
Faafin: SomaliTalk.com | Nov 21, 2011